Kungani Isu Lokumaketha Elihlanganisiwe? | Martech Zone
ULwesihlanu, July 6, 2012 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Kuyini ukumaketha okuhlanganisiwe? I-Wikipedia iyichaza njenge-centric yekhasimende, indlela eqhutshwa yimininingwane yokuxhumana namakhasimende. Ukumaketha okuhlanganisiwe ukuhlanganiswa nokuhlanganiswa kwawo wonke amathuluzi wokuxhumana wokumaketha, izindlela, imisebenzi kanye nemithombo ngaphakathi kwenkampani ibe uhlelo olungenamthungo olukhulisa umthelela kubathengi nakwabanye abasebenzisi bokugcina ngezindleko eziphansi.
Ngenkathi leyo ncazelo isho ukuthini is, ayisho kungani siyakwenza.
Kusuka kwaNeolane: Umthengisi wanamuhla unenselelo (noma ithuba) lokufinyelela kumakhasimende abo ngalokho okungabonakala njengenani elingapheli leziteshi zokumaketha. Abakhangisi badinga ukubeka ikhasimende esihlalweni somshayeli, okubavumela ukuthi bakhethe ukuthi bafuna ukuluthola kanjani futhi nini ulwazi olufanele kanye / noma bathenge. Kungumsebenzi womthengisi ukusebenzisa yonke le datha etholakalayo mayelana namakhasimende namathemba okuxhumana nawo ngalezi ziteshi ezithandwayo ngendlela ehambelana futhi eyenziwe ngezifiso kakhulu.
Isizathu sokwenza lokhu? Imiphumela. Iqiniso ukuthi ukusebenza ngaphakathi kwesilo kuthinta izindleko zalelo su elilodwa futhi akuvuni izinzuzo ngokuphelele. Ngokuhlanganisa amasu kukho konke ukusesha, ezenhlalo, i-imeyili, iselula, ividiyo, namanye ama-mediums, utshalomali lunethuba lemiphumela ehlanganisiwe. Abathengi namabhizinisi kabathengi ngesililo esisodwa… basebenzisa wonke amathuluzi adingekayo ukucwaninga ngesinqumo sabo sokuthenga esilandelayo. Uma ibhizinisi lakho lingahlanganisi ngamandla amasu akho, ithuba lokuzibandakanya nethemba lincishiswe kakhulu.
Tags: infographicukumaketha okuhlanganisiweisu lokumaketha elihlanganisiweneolane
Amathebulethi ashintsha kanjani imikhuba yokuthenga